I-China Atc yokuthenga iimpahla zomatshini kunye nabavelisi | JCUT
Umatshini we-ATC womthi womatshini we-cnc
Umatshini womatshini we-cnc we-cnc
Umatshini we-atc funiture
Umnyango wekhabhathi ngowemicimbi emibini. Kwiikhabhathi ezincinci kunye ezinobukhulu kunye nezityalo zewadi yokulungisa, iziphumo zikumgangatho olinganiselweyo, kwaye ukusebenza ngokugqibeleleyo kwezixhobo akukho phezulu kakhulu. Oku akunakuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo kuphela, kodwa kunqande nomngcipheko wokuthenga izixhobo ngamanani aphezulu. Kwaye inzuzo yokuqhubekisa ipaneli yomnyango ngokwakho kukuba unokulawula umgangatho wokulungisa kunye nokulungisa ixesha ngokwakho.
1. Lo matshini usebenzise i-GDZ okanye i-HQD brand Air Hearing Spindle. I-9kw amandla aphezulu espali, ukusebenza ngempumelelo komgangatho. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, utshintsho olukhawulezileyo lwesixhobo.
2. Ifakwe i-servo motor, iigiya zokuchaneka okuphezulu kunye ne-rack drive engeniswayo, eyenza ukuba umatshini usebenze ngokuzinzileyo, ngengxolo ephantsi, isantya esikhawulezayo kunye nokuma okuphezulu kokuchaneka.
3. Ubhedi obunzima bokugungxula okugugileyo (imitha emihlanu yokugaya ukuchaneka ngokuchanekileyo 0.02mm).
4. Inkqubo yokwenza umatshini ubhedu ovumelanayo webhedi ngombhobho wesikwere esimdaka kunye nomtya wensimbi ngomthi. Isakhelo sokudibanisa sokuhlangana asichazi ixesha elide.
5. Impompo yamandla aphezulu, Uyilo olunelungelo lobunikazi lwe-50MM ye-adsorption caliber, ukutywinwa okuhle kokuxhuma kombhobho wePVC, akukho bhodi yokuqhuba.
6. Ukuzalisa ngokuthe tye okutyabeka ngokuthe tyibilikiswa ngomgangatho wokutyhala kunye nomsebenzi we-aluminium bar yokungasebenzi. Ukusebenza kukrelekrele ngakumbi kwaye kusindisa abasebenzi.
7. Spindle ukwahlula okuzenzekelayo uhlobo lokudibanisa uthuli kunye nokususa uthuli olwesibini ngepusher. Ukusebenza ngobukrelekrele, ngakumbi ukwenziwa kwabantu.
8. Sisebenzisa ukungenisa i-Hiwin isikwere sikaloliwe, uphawu lweNice kunye nomgangatho omnandi. Malunga nokuhanjiswa, iX, Y axis isebenzisa i-rack drive, i-Z-axis ball screw drive. Ukuchaneka okuphezulu kwenxalenye yomatshini, yomelele kwaye yomelele.
Lo matshini yiphaneli ekhethekileyo yokufakelwa kwempahla ifanitshala eyenziwe ngokukodwa ngabavelisi beekhabhathi. Ilungele iikhabhathi zephaneli kunye nezinye izinto, ukusika, ukukrola, ukufotokopa, ukuntywila, usukelo oluninzi, ukonga indleko, umsebenzi kunye nexesha. , Iikhabhathi zezihlangu, ifanitshala yeofisi, ifanitshala yesiqhelo.
Isizukulwana eside uLongtengLinear R8 ATC CNC Router
Indawo yokusebenzela （S * Y * Z） 1220 * 2440 * 200mm (（ubude benkxaso 2800 ukwenza ngokwezifiso）
Isantya se-spindle 0-24000 / MIN
Isikhafu Ukupholisa umoya we-GDZ 9KW
Isixhobo seMagazini Izixhobo ezili-12 (xhasa izixhobo ezi-8-16
Khonza imoto UDorna 1500W （2 kumqhubi omnye 1
Khonza umqhubi Ukuxhasa ukuqhuba umqhubi wemoto
Inverter I-11kw Hpmant
Inkqubo yokulawula I-Taiwan syntec 60CA
Umkhondo wokuhambisa Y axis 30 isikwere
Isikali sebhola Isifo sephepha i-TBI 2510
isilayidi Y aixis30 isilayidi
Umda Ikhethekileyo kumatshini wokusika
intambo Intambo ephezulu yokuhanjiswa okukhuselekileyo
Ukusebenza kwamadolo I-35000MM / MIN
Umqokeleli wothuli Ingxowa kabini 5.5KW
Impompo yokuhlamba Umjikelo wamanzi 7.5KW
Isiseko sesithathu seLonteng patent isakhiwo （ulawulo oluzimeleyo lwekhabhathi）
Isakhiwo sebhedi Ukunyanga ibhedi yokugugisa ubunzima (ukubila kobuso obuhlanu kunye nokujongeka ngokuchanekileyo u-0.02mm)
I-Crossbeam eyindonga yombhobho wesikwere kunye ne-iron strip welding synchronous bed machining teknoloji yokwenza yonke into eyakhiweyo kwikholamu ayichaphazeli ixesha elide
Ikhomishini yokusebenza yekhompyuter Uchungechunge lwekhabhathi yeLongteng patent, itywinwe ngokupheleleyo kwikhompyuter yeekhompyuter
izinto ze-axis Umsebenzi we-ax ax wemoto, isihlalo sokuxhasa iZ axis motor screw
Itafile yokuhlamba Uyilo lobunini 50MM ye-adsorption caliber, uqhagamshelo lombhobho wePVC ukutywina kakuhle, musa ukuqhuba iplate
Isixhobo se sensor Isixhobo sefowuni yokuenzekelayo
Ukuma kwindawo yokondla Icala eliphindwe kabini kwiphakheji nganye yokubeka isilinda ngearuminiyam strip
Ukulayisha ngokuzenzekelayo Ngokuzenzekelayo ithayile ye-tiles ethe tyaba ngokuthe tye yokutsala ngokungasebenziyo
Indlela yodaka Isisongelo ngokuzenzekelayo isahlulelo sokudibanisa uthuli kunye nokukhupha uthuli lwesibini.
Edlulileyo: Umgca we-atc cnc router
Okulandelayo: 1325 isixhobo sediski kwi-atc cnc router
Atc ezintathu Spindle Cnc Router
IiNtloko zeeNtloko zePneumatic Atc Cnc Router
Iintloko ezintathu ze-Atc Cnc Router
I-1325 isine spindle kunye nomgca we-ATC
Uyilo olutsha i-spC esine-injini ye-cC ye-spindle
Isibini somatshini sokukroba umatshini wokucoca i-cnc router
1325 isixhobo sediski kwi-atc cnc router
I-ATC iinkuni cnc 1325
UKUQINISEKISA SIMAHLA +8618006360664
UKUQINISEKISA SIMAHLA +8615863173380